empty sky: Zim imports maize from Zambia to avert food crisis
Zim imports maize from Zambia to avert food crisis
From the Zimbabwe Independent (via AllAfrica.com):
ZIMBABWE has been forced to import maize from Zambia to avert starvation as a result of a massive maize deficit largely attributed to the country's disastrous agricultural policies. Ironically, Zambia used to import maize from Zimbabwe, but has recorded a surplus in the last two seasons having profited from the influx of white commercial farmers displaced by its southern neighbour's controversial land reform programme.
Zimbabwe faces a maize deficit of roughly 1 million tonnes after crops failed. Even without crop failures, Zimbabwe's agricultural sector no longer produces enough to feed her people. An estimated 1 million people need food assistance in Zim.
Labels: food security, Zimbabwe